सर्पले टोकेमा के गर्ने ? के नगर्ने ? जान्नुहोस – Idea Khabar
सर्पले टोकेमा के गर्ने ? के नगर्ने ? जान्नुहोस
आइडिया खबर२०७८ असार १५, मंगलवार १६:४०
सर्पदंशका घटना गर्मी महिनामा निकै बढ्छन्। खासगरी नेपालको तराईं भेगमा सर्पदंशका घटना बढी हुन्छन्। अमेरिकामा हरेक वर्ष ८ हजार मानिसहरु सर्पले टोकेर अस्पताल पुग्छन् । तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।
अधिकांश अवस्थामा सर्पदंश खतरनाक हुन्छन्। सर्पले टोकेको स्थानमा पीडा हुने, सुन्निने हुनुका साथै तन्तुहरुलाई क्षति पु¥याउँछन्। यसका साथै आन्तरिक रक्तस्राब पनि गराउँछन्। अमेरिकी चिकित्सकले सर्पले टोक्दा के गर्ने र के नगर्न भन्ने विषयमा केही सल्लाह दिएका छन्। ति के के हुन् जान्नुहोस ।
सर्पले टोकेमा तत्काल इमर्जेन्सीमा गइहाल्नुपर्छ। टोकेको त्यति विषालु नभएपनि टिटानस र केही गम्भीर ब्याक्टेरियल संक्रमणको खतरा हुनसक्छ।
एजेन्सी स्रोत : सीडीसी, अमेरिका swasthekhabar बाट साभार गरिएको